महामारी बन्दैछ, भिटामिन डी को कमी
परिचय : भिटामीन ‘डी’ चिल्लोमा घुल्ने स्टेरोइडल (कोलेस्टेरोलबाट बनेको) भिटामिन हो । यो भिटामिन प्राकृतिक रुपमा धेरै कम खानेकुराहरुमा मात्र पाईन्छ । क्यालसियम र फस्फोरस जस्ता महत्वपूर्ण खनिज तत्वहरुको उपपाचन (Metabolism) का लागि आवश्यक यो भिटामिनको कमि आजकल आम रुपमै देखिन थालेको छ । आन्तरिक रुपमा शरीर भित्रै पनि बन्न सक्ने हुनाले धेरै वैज्ञानिकहरू यसलाई भिटामिन […]
हस्तमैथुन गर्नाले पछि विवाह गरेपछि त्यसले नकारातमक असर पार्न सक्छ । हस्तमैथुनको बानी परेपछि यौन सम्पर्कमा ध्यान नजाने र तपाईको सम्बन्ध बिग्रने सम्भावना पनि हुन सक्छ । तपाईंलाई महिलासँगको यौनसम्पर्क हुँदा यौनेच्छा शान्त पार्ने वैकल्पिक उपायको आवश्यकता नभएको देखिएको छ, तर तपाईंले विवाहभन्दा बाहिरको यौनसम्बन्धले ल्याउने समस्याका बारे मा विचार पुर्यापउनुभएकै होला । मानिसहरु विवाहपछि […]
उच्च रक्तचाप व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरिएको खानपान व्यावथालाई चिकित्सा विज्ञानमा दाश (Dietary Approaches to Stop Hypertension) खानपान विधि भनिन्छ। यो खानपान विधिलाई उच्च रक्तचापको रोकथाम र उपचारका एवं मुटु रोगको जोखिक कम गर्नका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । आज यूरोप र अमेरिका जस्ता विकसित देशहरूमा उच्चरक्तचापको उपचारका लागि अनिवार्य रूपमा दाश खानपान खान सल्लाह दिईन्छ […]
प्रकृतिले मानिसलाई स्वस्थ रहन कम्तीमा ८ घण्टा सुत्ने समय तोकेको छ । तर कामको व्यस्तता र मोवाइल चेटिङ जस्ता कारणले ४,५ घण्टा भन्दा कम सुत्ने गरेको पाइन्छ । स्वस्थ रहन जति खानपानको आवश्यकता छ त्यो भन्दा सुत्न बढी आवश्यक छ । आज नेपालमा खानपिन र आराम गर्नमा लापरबाही हुनाले मानिस धेरै रोगको दलदलमा फस्दै गएको […]
परम्परादेखि चलिआएको जडिबुटी असुरोलाई एकपटक चलाएर हेरौं
परम्परा चिकित्सामा आधारित औषधि असुरो एकपटक प्रयोग गरेर हेरौं । यसको वैज्ञानिक आधार भनेको परम्परादेखि प्रयोग हुदै आएको डाबर र वैद्यनाथ कम्पनीले समेत औषधि बनाएर पठाएको छ यो औषधि ताजा जडिबुटी बनाएर सेवन गर्न सके राम्रो फाइदा हुन सक्ने भनेको छ । नोबेल कोरोना भाइरस कोवेड १९ आजभन्दा सन् २००३ मा देखिएको सार्सको रूपमा देखिएको […]
लण्डन । कोभिड-१९ अहिले विश्वव्यापी महामारी बनिसकेको छ । कसैकसैमा यो रोगले सामान्य प्रभाव मात्रै पार्छ भने केहीमा यो रोग मृत्युको कारण बनिदिन्छ । यो नयाँ भाइरसले कसरी शरीरमा आक्रमण गर्छ? यसका कारण किन मानिसको ज्यान जान्छ ? मानिसको शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि भाइरस फैलिन र स्थापित हुन केही समय लाग्छ । त्यसलाई ‘इन्क्युबेशन पीरीअड’ अथवा […]
एजेन्सी । आफ्नो पार्टनरमा हुने गुणका बारेमा हरेक मानिस सजग हुने गर्दछन् । उसको ब्यक्तित्व, क्षमता र विगतका साथै मानिसले उसमा केहि विशेष गुणहरु खोज्ने गर्दछन् । युवती आफ्नो पार्टनरमा निम्न ७ गुण खोज्ने गर्दछन्ः राम्रो रोजगार रोमान्टिक स्मार्ट तथा गुड लुकिङ केयरिङ गर्ने आर्थिक सबल परिवारमा समय दिने समझदार
९ जेठ, बीबीसी । खुर्सानीले शरीरभित्रका अत्यावश्यक रासायनिक क्रियाको गति एवं मुटुको चाल बढाइदिन्छ । पिरो खुर्सानीमा क्याप्साइसीन हुन्छ जसले इन्डर्फिन तत्व (उही आनन्द अनुभूति गराउने तत्व) को निष्कासन सक्रिय पार्छ । खुर्सानीले शरीरभित्रका अत्यावश्यक रासायनिक क्रियाको गति एवं शरीरको तापक्रम र मुटुको चाल बढाइदिन्छ । यौनक्रियाका बेला पनि त्यस्तै हुन्छ।
३६ प्रतिशत मानिसद्वारा अश्लील साइटको प्रयोग, जसले गर्दा स्वास्थ्यमा हुन्छ गम्भीर असर
एजेन्सी । अश्लील चलचित्रले सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक र मानसिकरुपमै नकरात्मक असर गर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ । बेलायतमा गरिएको एकअध्ययनअनुसार ११ देखि १६ वर्षसम्मका आधाभन्दा धेरैले इन्टरनेटमा अश्लील सामाग्री हेर्ने गरेको बिबिसीले जनाएको छ । चिकित्सकहरुले वैज्ञानिक अध्ययनहरु आवश्यक भएकोमा जोड दिएका छन् । सिविन नेपालले काठमाडौंमा गरेको अध्ययनमा ३६ प्रतिशत युवा उमेरका व्यक्तिले […]
स्वास्थ्यको लागि शिरोधारा लिनुका फाइदाहरू
शिरोधारा आयुर्वेदिय पञ्चकर्म विज्ञान अन्तर्गत पर्ने लोकप्रिय सुख चिकित्सात्मक उपचार विधि हो । निधार वा शिरमा निरन्तर स्नेहन द्रव्य धारा दिएर गरिने उपचार भएकाले यसलाई शिरोधारा भनिएको हो । रोगावस्थ वा रोगीको प्रकृति हेरेर तेल, घ्यु, दुध, मोहि, , वा सादा पानी जस्ता पदार्थलाई सिधै अथवा आयुर्वेयिदय औषधिहरु मिलाएर शिरोधारा दिइन्छ । स्वस्थ्य व्यक्तिको लागि […]
यी कुराले गर्दा महिलालाई यौन सम्पर्क गर्न उत्सुक हुन्छ !
एजेन्सी, हालै एउटा अनलाइन डेटिङ साइटले यौन सम्पर्कको विषयमा अनलाइन सर्भेक्षण गरेको थियो । महिलाहरुलाई यौन सम्पर्कका बेला के गरेको मन पर्दछ ? कस्तो खालको संसर्गको शैली मन पर्दछ ? अनि सेक्समा के कुराले मूड अन गरिदिन्छ ? भन्ने विषयमा सोधिएको थियो । उक्त अनलाइन सर्भेक्षणले केही रोचक नतिजा दिएको छ । झण्डै चार लाख […]
थाहा पाउनुहोस्, महिलाको योनीमा एलर्जी हुनुका कारणहरु
एजेन्सी, महिलाहरुमा विभिन्न खालका समस्याहरु आइरहन्छ त्यो मध्ये एक हो योनीमा एलर्जी हुने समस्या । यो समस्या यौन सम्पर्कपछि कुनै महिलाको योनीमा आउन सकिन्छ । एक अध्ययनले सेक्सपछि महिलाको योनीमा हुने एलर्जीको मुख्य कारण पुरूषको सीमन पनि हुन सक्ने देखाएको छ । चिकित्सककाअनुसार योनीको लाज्मा हाइपरसेंसीटिविटी बदलिने गर्छ । जसले गर्दा सामान्य संक्रमण हुने गर्छ […]
यस्ता छन् अश्वगन्धा प्रयोग गर्नुका फाइदाहरु
यौन दुर्बलता र नपुंसकता, मुर्छा, अनिन्द्रा, वाथ रोग, नशा सम्बन्धित रोग, शारीरिक कमजोरी, गर्भाशय र योनी सुन्निएको, योनीबाट सेतो पानी बग्ने, स्त्रीले गर्भधारण गर्न नसक्ने, अजीर्ण-अपच, भोक नलाग्ने, पेट दुखेको, क्षयरोग, बच्चा दुब्लाउँदै जाने, श्वासप्रश्वासको समस्या, उच्च रक्तचाप, रक्त बिकार आदि रोगहरुको उपचारमा यसको जराको चूर्ण सेवन गरिन्छ तथा पातलाई चिया जस्तै पकाएर खाइन्छ । […]
भँडी लाग्नु वा धेरै मोटाउनु अस्वस्थ शरीरको सूचक हो । मोटोपन आफैंमा कुनै रोग होइन तर मोटाउन थालेपछि शरीरमा अनेकौं रोगले घर बनाउन थाल्छन् । अस्वभाविक रुपमा भुँडी लाग्नु वा शरीरमा अत्यधिक बोसो जम्नुलाई चिकित्सा विज्ञानले मुटुरोग, मधुमेह, दम, उच्च रक्तचाप, पेटका समस्या, हर्माेनहरुको समस्या जस्ता रोगको प्रमुख कारकको रुपमा मानेको छ । हाम्रो शरीरमा […]
के यौनाङ्ग छोएका कारण कोरोना भाइरस सर्छ ?
एजेन्सी । कोरोना र यौनजीवनमा यसको असरका विषयमा बीबीसीले तयार पारेको यो रिपोर्ट पढौँ । के यौन सम्पर्कका कारण कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण सर्न सक्छ ? यसबारे तपाईँले सोच्नुभएको होला तर सङ्कोच लागेर प्रश्न नगर्नु भएको पनि हुन सक्छ। यस विषयमा सही र गलत कुरा छुट्यावन बीबीसी रेडिओ वनको न्यूजबीटले यो प्रश्न विज्ञहरूलाई राखेको छ। डा. एलेक्स […]
राती सुत्नुभन्दा अगाडी आफ्नो पार्टनरसँग भुलेर पनि गर्न नहुने कुराहरु
एजेन्सी । श्रीमान श्रीमती भनेको यस्तो सम्बन्ध हो । जसलाई अरु कुनै सम्बन्ध संग मूल्यांकन गर्न सकिदैन । किन भने यो सम्बन्ध भनेको एक रथको दुईवटा पांग्रा भन्ने पनि गरिन्छ । त्यसैले गर्दा यो सम्बन्ध एकदमै ठुलो सम्बन्ध हो । तर यो सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनको लागि पनि त्यतिकै चुनौती पनि छ । किन भने श्रीमानलाई […]